Semalt: Sei Great SEO Rankings Usati Wakaitika Overnight
6ES7194-4AF00-0AA0 SIEMENS.5;color:#5f5f5f;text-align:justify;font-style:italic;"> Pane nhoroondo yakawanda inowanikwa pakati pevanhu vasinganzwisisiSEO iyo SEO masangano anogona kukuita iwe kubudirira kweusiku humwe. Agence inogona kuvimbisa kuti ichakuisa peji rekutanga reGoogletsvaga mhinduro pakarepo. Zvisinei, heino chokwadi chakaoma: hazvina mhosva kuti SEO yakakura sei, haigoni kukuvimbisa kuti unotsvaga.
Vanhu vanowanzokanganisa pavanofunga kuti injini yekutsvagaoptimization (SEO) ichashandura website yavo usiku husiku. Zvechokwadi, ichokwadi kuti SEO inogona kuchinja nzvimbo yako asi inkwenguva refu. Nyaya inonyanya kufarira SEO inowanzoreva kuti nzira chete yekufarira zvose zvinobatsira zve SEO ndeyekushivirira uye kunzwisisaiyo yakaoma yezvinhu, izvo zvinoita kuti SEO ibudirire.
Mutengi Wekutengesa Mubudirira we Semalt ,Digital Services, Igor Gamanenko anotsanangura zvakakosha SEO chokwadi iwe unofanira kuziva.
Pane zvinhu zvakawanda zvinotanga kuitika musimboti yakokuwana nzvimbo yakakwirira paGoogle mapeji emagetsi ekutsvaga anozivikanwawo seSERPs. Mushure mezvose, Google ine maitiro anosvika mazana maviri ekuenzanisa,iyo inogara ichichinja. Nokushanda nguva dzose pane imwe neimwe yazvo, iwe uchasvetuka kuburikidza nemakumbo akawanda uye kuedza kuonachii chinoita kuti iwe uve nemigumisiro mikuru uye isingaiti.
Chimwe chezvinhu zvinowedzera kukwirira pamapeji ekutsvaga kweGooglezvakaoma ndeyekuti Google inoramba ichishandura mararamiro ayo pasina kuzivisa kuchinja. Apo Google inogadzirisa maitiro ayo, haawanzoitikuzivisa kuvanhu. Somugumisiro, SEO nyanzvi vari kushamisika kuti chii chichave chichienzaniswa zvakanaka uye izvo zvisingakwanisi.
Kana imwe shanduro ichishanduka, yakanakisisa SEO nyanzvi inounganidzadhiyabhorosi kubva kune nzvimbo dzakawanda kuti uongorore zvave zvashandurwa..Pavanenge vachiongorora iyo data, vanoita zvisarudzo zvakasimba pamusoro pezvakachinjwauye kuti ungaita sei kune izvo zvinoshanduka.
Kudzidza SEO kushandiswa kunoda kupedza nguva yakawanda kushandauye kudzidza zvakaoma. Pano, iwe unofanirwa kushanda webhusaiti rekuongorora nekusika Google-yekodzero yehuwandu. Izvozvi zvinhu zviviri ndiyo mbiru dzinoita SEOchakaoma, zvisinei, hapana nzira shomanana yekubudirira pasi rose.
SEO inomhanya kwenguva refu
Peji yakatarwa yeGoogle ndiyo chinangwa chinogara chiripo.Izvi zvinoreva kuti hapana chivimbiso chichaita kuti vadzikwi vako vawane yakakwirira kana kwete. Nhasi, iwe unonzwisisa kuti nei SEO yakaoma uye inotoranguva yekushanda pairi. Saka, tinofanira sei kugadzirisa zvinangwa zvekuti tive nekuvimbika, zvigumisiro kwenguva refu?
Pawakatanga kutarisa SEO sechinangwa chenguva refu,iwe watova nekutanga musoro. Kuvaka nheyo iri nani, ramba uchifunga kuti SEO inoshanda chete maererano nechinangwa chenguva refu.Kuti uite kuti ibudirire, shandisa SEO kuedza kwako kuendesa mberi kune imwe nzvimbo panzvimbo yako uye kutengesa kutengeswa mukati meimwe nguva.
SEO Inoda Kuvema Kwemari
SEO yakakura inoda kuti iwe uwedzere nguva yakawanda yekushambadzira nguva yako uyeresources. Paunoisa nguva, kuedza uye kuunza zvigadziriswa, iwe uchawana chikwata chinodzoka pakupera kwezuva.
SEO Zvinangwa zviri kuchinja
Sezvo SEO inofambisa kuwedzera kwebhizimisi,hapana nzira iyo iwe unokura nayo static chirongwa chayo. Kuti urambe uchifamba, ramba uchiongororazve SEO yako gore negore. Kuti zvive nemigumisiro yakanaka, fungaKuzvidzokorora kwegore negore.
Kana wakabhadhara kambani yeEOO inokudzwa, vachaitakukuzivisai kuti havagoni kutumira zvabuda usiku. Kana uchinge wasimbisa mitemo yekutaurirana, chengetedza ruzha rwekutauriranapamusoro pezvinotarisirwa nemigumisiro yekudzivisa kusanzwisisana. Kunyange zvazvo SEO haisi yehusiku husiku, ndicho chinhu chaunofanira kuisa kubva ikozvinomhedzisiro inobatsira. Paunoisa zvinotarisirwa uye unonzwisisa kuti zvinoshanda sei, uri munzira yakarurama yekuwanaiyo yakanakisisa inodzokera kune inowanikwa mu SEO.